Kombiyuutarka kaararka ugu fiican ee loo yaqaan 'generator gift card' kaadhka hadiyadeed ee bilaashka ah codsiyada lacag la'aan ah
by admin> Uncategorized - 25 May 2018
Generator-ka loo yaqaan 'Legitimate and Free iTunes Gift Cards'
Waxyaabaha dhabta ah ee ku saabsan nolosha waa in aysan jirin wax caynkaas ah sida qadada bilaashka ah. Taas ma runbaa? Waa hagaag, had iyo jeer maahan. Waxaan rajeyneynaa, inaan lagaa jarin wax aan ku qornay ilaa hadda. Sidee kudhaceysaa qof nasiib qaata oo wax soo saara oo ku riyaaqi kara waqti dheer kadib markii la iibsaday, lagu duudduubay, oo la keenay? Waa hagaag, uma baahnid PhD si aad u ogaatid inaan ka hadleyno iTunes Kaararka sowha. Maaddaama boqolaal idinka mid ah aad ogaan kartid, quruxda kaadhka hadiyaddu waa in loo isticmaalo in lagu iibsado filin kasta, barnaamijyada TV-ga, barnaamijyada, buugaagta, cayaaraha, ama muusikada shakhsi ahaan shakhsi ahaaneed. Sidaas darteed, haddii aad heleyso kaadhadhka bilaashka ah saaxiibkaaga ama shisheeye aan kala sooc lahayn, waxaad ogaan kartaa in qofka nasiib helaya uu yeelan doono qarax. Su'aasha halkan waa, ma waxaad bixineysaa qiimaha buuxa ee waxa aad rabto ama sameyso kaadhka hadiyadeed ee bilaashka ah weli jiraa?
Maxay tahay sababta mushaharkaaga loo bixiyo?
Haddii aad weli bixisid qiimaha buuxa ee filimyada, barnaamijyada, buugaagta, iwm, App Store, adigu adigu iskaa wax u qabso si aad u noqotid. Waan ka xunnahay in aan codka adag ku dhicin halkan, laakiin ma jirto hab wanaagsan oo lagu barbaarinayo dhibicda dadka madaxa qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, dhibic halkan waa in aadan khasab ahayn in aad iska xiirto doolarka sare si aad u hesho kaadhadhka hadiyadeed ee iTunes kuwaas oo la yimaada xaddi lacageed oo gaar ah, taas oo lagu xiri karo lacagta la rabo sida filimada, ciyaaraha, barnaamijyada, iwm. Trick halkan waa si aad u isticmaasho wanaag Abuuraha codka hadiyadeed ee iTunes si aad uga nadiifiso lacagaha walaaca bixinta qiimaha buuxa ee wax kasta oo ku yaal App Store.
Ma aha mid sahlan in la helo joornaalka kaararka kumbuyuutarka ee loo shaqeeyo!
Hadda, tani waxay kuugu yeeri kartaa Jarmal adiga, haddii aad mar horeba tijaabisay ciidan Abuuraha kaararka deeqda ee iTunes oo leh nasiib xumo illaa heerkan. U aamuso ama maahan, dadka intooda badani waxay ku dhex jiraan doonni isku mid ah. Si fiicana u hadlaa, way adag tahay in la helo qalab shaqeyn oo shaqaynaya oo da'diisa iyo wakhtigiisaba. Xitaa haddii aad u baahantahay inaad aragto wax shaqeynaya, waxaad isla markiiba ogaaneysaa in aysan sida foolxumada ah u muuqan sida bilowgii hore. Nasiib darro, taasi waa xaaladda dhabta ah ee arrimaha Koronto-dhaliyayaasha deeq-bixiyeyaasha ee iTunes maalmahan
Si daacad ah ayaan u hadalnay, maba jirin wax qalad ah. Waxaan leenahay qaybteena niyad-jabka, argagax iyo jaahwareer. Waqtiga qaarkood, waxaan u maleyneynaa in aanu noqonayno qofkii ugu dambeeyay ee aduunyada si aad u hesho lacag la'aan ah codadka iTunes. Hase yeeshee, waxaa jiray sheeko xiiso leh sheekada. Dhinac ahaan, waxaan ku soo aragnay a matoor Taas oo nasiib-darro nagu samaysay iyada oo aan lafa-xayirnayn cufka caadiga ah ee ku lug leh koorsada helitaanka lacag la'aan ah codadka iTunes. Waxay dareemeysay sida lambarrada nooca bakhtiyaa nalooga yeedheen, waxaanan u soconay marxaladda si aan u soo aruurinno bilicda.
Qalabka dhabta ah ee ay isticmaalaan dad badan oo kale!
Si aad u gooyso sheekada gaaban halkan, waxaan halkan u joognaa inaan wadaagno sharci Abuuraha codka hadiyadeed ee iTunes taas oo loo isticmaali karo qof walba oo ka baxsan si ay gacmahooda u dhigaan Kaararka bilaashka ah ee iTunes. Miyuu codkani yahay mid sharci ah oo aad u wanaagsan inuu noqdo mid run ah? Hayso! Wali ma nihin wakhti iyo waqtigeena. Dhalinta korontada ee su'aashu way shaqaysaa. Haa, waxaa la tijaabiyey wakhti marba la isku dayay lacag la'aan ah codadka iTunes. Inta badan saaxiibadeena dhow iyo xubno ka mid ah taageerayaasha qoyska ayaa durbadiiba ka faa'iidaystay qalabkayaga. Sidaas darteed, waxaan ognahay in tan Abuuraha kaararka deeqda ee iTunes wuxuu u shaqeeyaa sida sixirka.
Marka, tani macnaheedu waa adiga? Waxaa macnaheedu yahay inaad u baahan tahay inaad noqoto feejignaan inta aad awooddo, ka faa'iideysana fursadan aad u fiican inta ay weli jirto. By habka, ma waxaan kuu sheegi in generator ma qarashgareyn doonaa dongo kali? Haa, waa 100% free, waana mid ka madax bannaan fayruuska iyo cayayaanka kale ee aad ka fekereyso. Sidaa daraadeed, waxaan go'aansanay inaan ka soo baxno furan si aan idiin soo bandhigno si sharci ah oo sax ah Abuuraha kaararka deeqda ee iTunes, sidaa daraadeed adiga ayaa ka faa'iideysan kara qalabka kaadhka hadiyadeed ee bilaashka ah ee iTunes.
Waxaa laga yaabaa inaanay shaqaynin da'da ...
Qalad ha dhigin; ma hubno inta uu le'eg yahay Abuuraha codka hadiyadeed ee iTunes shaqeyn doonaa. Waxaan adeegsaney jenerayeyaasha hore ee aan ku sii socon suuqa oo aad u dheer. Si daacad ah u hadlaya, midkani waxa uu ka badbaaday muddada dheer. Dhab ahaantii, waxaan u muuqday cajiib ah qalabkii joogtada ahaa ee joogtada ahaa ee ku jiray suuqa kaararka hadiyadaha had iyo jeer ee digniinta ah. Sidaa darteed, waxaan u sheegi karnaa in tan kaadhka hadiyadeed ee bilaashka ah qalabku waa cut ka sarreeya xadka. Laakiin, ha sugin waqti dheer ama haddii kale waad iska dhaafi kartaa baska, sababtoo ah waxaan si adag u aaminsanahay inaysan jirin hab kale oo degdeg ah oo haboon kaadhka hadiyadeed ee bilaashka ah. Midkani waa muraayad dhab ah.
Waayo, kuwa aan caynkaas ahaynna dan kama galo, kaadhka hadiyadeed ee bilaashka ah waxa ay noqotey qalab caadi ah oo loogu talagalay dadka leh nacasnimo. Ka aamuso ama haddii kale, dhibbanayaasha qaar ayaa ka lumay boqolaal kun iyo kun oo doolar si ay u sameeyaan jeneraal been abuur ah oo la mid ah Kaararka bilaashka ah ee iTunes qalab. Haddii aad tahay qof wax ka bartay khaladka kale, waxaad nasiib u leedahay. Sida ay yiraahdaan, "Sida ugu fiican ee macluumaadkaaga dhaqaale ee amniga ah waa inaanad u soo bandhigin meesha ugu horeysa." Sidaa daraadeed, dhibic halkan waa inaadan bixin wax macluumaad ah oo ku saabsan Abuuraha codka hadiyadeed ee iTunes oo codsanaya macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ama maaliyadeed.
Soodejin iyo hab nabad ah si aad u hesho codadka lacag la'aan ah!
Nasiib wanaag, koronto-ku-xaajoodka lagaga hadlayo boostada uma baahna macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ama maaliyadeed si uu kuu siiyo kaadhka hadiyadeed ee bilaashka ah. Marka, ma jiraan wax jabin sharciyada ammaanka internetka. Sida hore loo soo sheegay, maaha inaad bixiso wax kale. Sidaa darteed, waxaad ku jirtaa dusha sare ee ciyaarta ka baxsan ereyga maxaa yeelay waxaad leedahay wax aan lumin. Taasi waxay la mid tahay in aad haysato dhammaan kaararka aad ku raali geliso. Ma jirto hab aad ku guuleysan kartid guuldarada. Sidaa daraadeed, wax qabad ah ma hayno waxan soo jeedineynaa Abuuraha kaararka deeqda ee iTunes. Waxaan hubnaa in ay samayn karto adduunyo wanaagsan oo ah tobanka iyo kumanaan Kaararka bilaashka ah ee iTunes xiisaha uu xiiseynayo halkaas. Sidaa darteed, sii soco oo bixi tallaal at kaadhka hadiyadeed ee bilaashka ah koronto-dhaliyaha ilaa uu dhammaado. Waad ku soo noqon kartaa oo nagu mahad naqi kartaa wakhti kasta waddada!
27 Comments ON " Kaararka hadiyadeed ee bilaashka ah "
Samsblogs May 25, 2018 at 7: 49 AM - Reply
Saaxiibbadu waxay wadaagaan laba jeer, tani waa gebi ahaan tilmaanta ugu fiican ee aan weligaa aqrin. Hadda u soco si aad u hesho kaarka hadiyaddeeda!
Damylooks88 May 25, 2018 at 7: 51 AM - Reply
qalabku waa dhab !! Waxaan helay koodhadhka hadiyadeed ee hadiyaddeeda oo aan si guul ah u furtay!
Danny May 31, 2018 at 1: 57 pm - Reply
Hesho koodhkayga: p
Lukas Juun 19, 2018 at 11: 16 pm - Reply
naxdin leh July 5, 2018 at 10: 38 AM - Reply
soo saaray 3 codsiyada, ayaa midba midka kale soo furtay, wuxuu siin doonaa laba kale qoyskeyga
sunny5 July 22, 2018 at 11: 34 AM - Reply
Habka waa mid dhab ah!
Duuuuuuude August 2, 2018 at 7: 51 AM - Reply
La yaabka leh!
Simon September 7, 2018 at 5: 25 AM - Reply
taajir September 14, 2018 at 2: 02 pm - Reply
Waxaan sameeynayaa midaan joojinayn
taajir September 14, 2018 at 2: 12 pm - Reply
la soo furtay
GC September 20, 2018 at 7: 32 AM - Reply
Abuuray oo si guul leh u soo iibsaday kaadhka deeqda ah ee 50: ppp
vasaaaga September 27, 2018 at 7: 49 AM - Reply
Eeyga badbaadiyaha Oktoobar 4, 2018 at 8: 01 AM - Reply
Xaqiiqdii aad ayaan uga mahadcelinayaa
Kerbelly Oktoobar 11, 2018 at 8: 18 AM - Reply
Trekk13 Oktoobar 25, 2018 at 9: 47 AM - Reply
Tani waa dhab
Amazingspoder Nofeembar 15, 2018 at 11: 38 AM - Reply
Barry Nofeembar 22, 2018 at 8: 46 AM - Reply
Qaadashada waxyaabo fara badan oo fara badan: p
Toro Nofeembar 29, 2018 at 11: 00 AM - Reply
itunes ayaa aqbashay koodhka kaarka hadiyadeed ee aan sameeyay
gogo December 13, 2018 at 8: 57 AM - Reply
Sanarajan December 20, 2018 at 8: 53 AM - Reply
Nasiib ayaan ahay
777 Janaayo 3, 2019 at 12: 05 pm - Reply
Suarez Febraayo 7, 2019 at 4: 33 pm - Reply
Xaqiiqda waa shumis
Habo Febraayo 21, 2019 at 4: 49 pm - Reply
Waxaan ubaahanahay 100 $
colio Febraayo 21, 2019 at 6: 31 pm - Reply
LNSKA $ Lolan Lacag ah
anton Febraayo 28, 2019 at 4: 54 pm - Reply
u socotid si aad u iibsato v bucks: p
waxba kama jiraan Maarso 7, 2019 at 2: 58 pm - Reply
Wons May 2, 2019 at 9: 36 AM - Reply